Ukuthola ku-Google Panda | Martech Zone
NgoMgqibelo, Ephreli 23, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 Douglas Karr
Izinkampani ezimbalwa engizaziyo zalimala ngenguquko ye-algorithm eqanjwe panda. IPanda ibigxile futhi ihlose ukuqondiswa amapulazi okuqukethwe kodwa une kuthinte amabhizinisi amaningi. Omunye umngani wami kudingeke ukuthi adilize umsebenzi isisebenzi sakhe sokuqala ngenxa yokulahleka kwabo besezingeni lophiko lwemibhalo lochwepheshe oluholele ukukleliswa cishe iminyaka eyishumi. Namuhla, simise ubudlelwano nomunye wamakhasimende ethu esiwathandayo. Ukulahleka kwabo okukhulu kwemali engenayo yokukhangisa bekufanele kubhekwane nakho (sisazoqhubeka nokubasekela ngoba angingabazi ukuthi ithrafikhi yabo izobuya).
Ngihlangane neklayenti namuhla futhi igumbi belibuhlungu kakhulu. Bangaphansi kwengcindezi enkulu yokuqhubeka nokukhulisa imali engenayo, ngakho-ke ukubuyela emuva kanjena kukhulu. Ngenhlanhla, umkhiqizo wabo uyabandakanyeka, ngakho-ke ngincome ukuthi bakubhekisise ukukhuliswa ukuthatha abalandeli babo abaphangayo futhi bakhe isimo lapho bevuzwa khona ngokuqhubekayo futhi babonwa ngokusebenzisa insizakalo abayinikezayo.
Ohlangothini lwenjini yokusesha, inkulumo ibinzima kancane. Lapho iGoogle ithanda amapulazi wokuqukethwe, siphoqa ingqalasizinda ukuthi ishicilele okuqukethwe ngokuvundlile. Isihloko esithile ku-arsenal yabo singaba namakhasi angama-22,000 ngaphansi kwaso - futhi sibacindezele bonke. Isiza besisikhulu, kepha sisebenzise iGoogle ngendlela efanele - ukukhuphuka komgwaqo kanye nemali engenayo.
Ngaphambi kwePanda (iGoogle isaqhubeka nokwenza i-tweak), bekulula ukushicilela okuqukethwe okusha futhi ube nalelo banga lokuqukethwe kahle. Kubukeka sengathi ukubekwa kahle kwemigomo ethile kuthinte ikhono lakho lokushicilela okuqukethwe futhi ubekwe ohlwini lwamagama angukhiye alandelayo - noma ngabe bekungafanelekile kangako. Akusenjalo.
Ngemuva kwePanda, i-algorithm ibonakale ifakwa emuva. Noma imaphi amakhasi abekhona kusayithi angalinganisanga noma aqhube ithrafikhi empeleni abe yisisindo esikhulu esidonsela phansi isiza sonke. Izinyanga ezi-4 ziqondile sibheke isayithi liqhubeka ukwehla - hhayi nje ukukleliswa, kepha kakhulu ngamagama asemqoka ahlinzekele imiqulu yokusesha kakhulu. Akukuhle.
Yini izinkampani kulimale i-algorithm ye-Google Panda ukwenze ngokulandelayo?
Susa amakhasi ancelayo. Amakhasi amabi anenani elincane, okuqukethwe okungalungile, umthelela ophansi nezinga elibi kudonsela phansi amakhasi amahle kusayithi lakho. Zisuse manje.
Uma unepulazi lokuqukethwe elivundlile… okusho ukuthi azikho izinyathelo eziningi zokuhamba phakathi kwekhasi lakho eliyisiqalo nekhasi eliphansi kunawo wonke kusayithi lakho… cabanga kabusha ngesikhundla sakho. Esikhundleni sokushicilela okuqukethwe kwakho okuhle kubanzi kube ngezihloko ezinomsila omude… kukugoqele kuma-silos amancane wolwazi. Isibonelo: Uma nginesayithi ekumaketheni futhi umsila omude ukuthi ungabeka kanjani izinga ku-Google… esikhundleni sokuba nekhasi elilodwa lokuthi ungabeka kanjani isikhundla ku-google, kungenzeka ngibe nekhasi eliwumgogodla ku-Marketing ne-Google elihlanganisa okuningi okuqukethwe eqenjini elihlakaniphile.
Qhubeka nokukhuthaza amakhasi amahle nokuma okuhle onakho. Ukuze umelane nesisindo samakhasi angawenzi kahle, udinga ukuqhubeka nokwazisa amakhasi ngaphakathi kwesiza sakho aqhuba kahle - ukuxhasa nje isikhundla sawo.
Yenza zonke ezinye izici ze-SEO ngokungenaphutha - kufaka phakathi i-robots.txt, i-sitemaps.xml, i-pinging, ukwakhiwa kwamakhasi, njll. Awusekho umkhawulo wephutha noma ubudlabha ngepulazi lakho lokuqukethwe. Yeka ukwenza izaba bese ulungisa isiza sakho. Lungisa ikhwalithi, ukumelwa, isivinini… konke ngakho.
Amapulazi wokuqukethwe akuyona into embi (iGoogle isayithanda iWikipedia). Ukuqalisa isiza elisebenzisa ngokunenzuzo izinjini zokusesha nokuletha okuqukethwe okuningi okuhle, okufanele akuyona into embi. Abathengi bayakwazisa okuqukethwe okuhle (noma ngabe iPanda ikushaya indiva). Ukuqalisa ipulazi lokuqukethwe kube nzima kakhulu kusukela ePanda, noma kunjalo, ngoba manje ivolumu yamandla owakhiqizayo ihlangabezana nemibono emibi kakhulu kulokho ozama ukukufeza.
Ukufaka isicelo kwimidiya yezenhlalo yokukhulisa nokwenyusa, kanye nokusebenzisa amanye amasu okubandakanya abasebenzisi njenge-imeyili, ukukhulisa nokukhulisa, kungathatha ivolumu enkulu yezivakashi futhi kwenze izikhala zakho ngokuzenza izivakashi eziphindayo.
Ividiyo: Ukulahlwa kwenqola yokuthenga noListrak
Ngo-Apr 23, i-2011 ku-10: i-14 PM
Ngakho-ke futhi konke kwehlela kwikhwalithi ngaphezu kobuningi.
Ngo-Apr 23, i-2011 ku-10: i-42 PM
Impela ibhalansi, Atul. Okuthunyelwe okukodwa okuphelele kungathengisa izinto ezimbalwa… kepha okuthunyelwe okuhle okuyikhulu kuzothengisa okuningi kakhulu. Ukudonsa amathani wokuqukethwe okonakele bekulokhu kuletha lezo zivakashi zamasayithi - kepha angingabazi ukuthi yake yaphenduka imali engaba nayo.
Ngo-Apr 29, i-2011 ku-3: i-54 PM
Futhi kufanele ukhumbule ukuthi i-google manje isiza iziza ezikleliswe phezulu kunesici sokunamathela, yingakho izingosi zemidlalo manje sezizuza kakhulu.
Jul 4, 2011 ku-9: 42 AM
Lokhu bekuyindatshana enhle kakhulu. Isiza sami i-HostingPost.com siyizithangami ezinkulu kakhulu kodwa sashaywa kanzima, saphonsa u-90% futhi saqhubeka nokulahla… Ngisaphikisana uma ngifuna ukuzama enye into ngokuphelele. Ngiyabonga
UJun 21, 2012 ngo-12: 09 AM
Izinga lokuncipha lilinganisa imisebenzi yomfundi
kubhulogi yakho. Okusho ukuthi, yikuphi okuthunyelwe abakufundile lapho
ifike ekhasini lakho eliyisiqalo. Uma abantu bengachitha isikhathi esiningi sekhwalithi ku-
blog, lokhu kuhle kakhulu emehlweni weGoogle.
Isikhathi sokugcina lapho ngihlole isilinganiso sami sokuncipha ngisebenzisa i-Google analytics, bekungukuthi
56%. Ezingeni eliyisisekelo, lokhu kuyakhuthaza kepha kusenokuningi enginakho
umsebenzi okumele wenziwe ukwehlisa iphesenti.
Ukwehla kwamanani we-bounce kungcono kubhulogi yakho. Uma i-bounce yakho
amanani awela ngaphakathi kwama-50 - 100%, kungcono uqale ukubhala okuqukethwe okubandakanya
lokho kungasiza abafundi ngendlela ekhetheke kakhulu. Ncoma okuthunyelwe okufanele
futhi ukhuthaze ukuphawula.
Jul 6, 2012 ku-9: 05 AM
I-Great Article, ngicabanga ukuthi ngePanda, iGoogle izama ukuqeda noma yimaphi ama-SEO akhamela usizo ukuthola amazinga aphezulu ngaphandle kokusebenzisa i-Adwords. Ngokwami ​​ngicabanga ukuthi bakuthathe kancanyana baya kude, ngicabanga ukuthi bazama ukukhama wonke amasenti kubantu abaku-inthanethi. Bafuna ukukwenza konke kube sethubeni.
Jul 28, 2012 ngo-10: 51 PM
Ngokwethembeka konke, ngemuva kokubheka isayithi lakho, ngicabanga ukuthi ngizosebenzela ukusebenzisa uhlelo olwaziwayo lokulawulwa kokuqukethwe nokungenisa okuqukethwe kwakho. Ngicabanga ukuthi ungahle uhlupheke ngenxa yezixhumanisi eziningi ekhasini.